Radio Don Bosco - Miambena mba ho mendrika...
Miambena mba ho mendrika...
Sabotsy 28 nôvambra 2020 — Herinandro faha-34 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 21, 34-36 — Miambena ary mivavaha mandrakariva, mba ho mendrika hitsangana hiseho eo anoloan’ny Zanak’Olona ianareo.
Mampianatra ny mpianany hahalala onona na amin’ny fihinana na amin’ny fisotro ary ny fiahiana izao fiainana izao i Jesoa. Tsy maintsy miady amin’ny endriky ny fakam-panahy isan-karazany izay manara-dia Azy. Raha variana amin’ny fihinanana sy ny fisotroana ary ny fiahiana izao fiainana izao ny fo amam-panahy dia hanadino ny lanitra sy fahasambarana atolony. Tsy maintsy atodika any amin’Andriamanitra ny fo amam-panahy. Mbola mitombona hatrany ny fanentanana sy ny fampianarana ataony na dia amin’izao androntsika izao aza. Maro ny manadino na tsy mahalala na minia tsy mahalala ny fiainana ampanantenainy ka variana miondrika amin’ny tany.
Fomba fitenin’i Jesoa any ho any ny hoe : “Miambena sy mivavaha fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora hiavian’ny Zanak’olona”. Lazainy tany aloha koa fa ho “ankona foana ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay loza hanjo izao tontolo izao, fa hiozongozona ny herin’ny lanitra. Dia ho hita amin’izay ny Zanak’olona avy any ambonin’ny rahona amim-pahefana sy voninahitra lehibe”. Mila fahavononana ny fitsenana izany zava-miseho izany. Ny olona miandrandra ny lanitra sy mivavaka fa tsy miondrika amin’ny tany no olona manana fahavononana hisedra izany. Koa manafatra i Jesoa mba hivavaka lalandava ; vavaka feno fahatokisana an’Andriamanitra feno fanetren-tena sy faharetana. Tsy misy mahasolo ny vavaka eo amin’ny fiainana satria io no ahafahana mifandray amin’Andriamanitra loharanon’ny soa rehetra. Raha eto amin’ny Evanjely, ny vavaka no ahafahana miala amin’ny loza rehetra. Na i Jesoa aza teo anatrehan’ny sarotra dia nivavaka ary nitaona ny mpianany hanam-paharetana hivavaka. Noho izany ny vavaka no anovozana ny hery rehetra entintsika miatrika ny fiainantsika. Amen !